သင့်ကိုယ်သင် Meez! | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2007 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
အဆိုပါ Colt အဆိုပါ Superbowl အနိုင်ရအပေါ်သွားအဖြစ်ယနေ့အနည်းငယ်အလင်းပျော်စရာ! Go Colts! ဒီရွေ့လျားထွက်စစ်ဆေး!
ငါသည်ဤပစ္စည်းပစ္စယများအတွက် sucker မိပါတယ်! ငါသောနေ့ရက်ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ် Meez ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထပ်ထည့်သည်။ …ငါရေပိန်ထဲမှာနေတုန်းကဒီဂျပိန်ကိုမကြည့်ခဲ့ဘူး။
Colts: Superbowl Champs! အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းတည်ဆောက်သူ - ရှုံးနိမ့်သူ!
5:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 44 တွင်
သင့်ရဲ့ meez ပို့စ်တင်ဘို့ thx ။ သင် site ၏ကျန်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်မျှော်လင့်ပါတယ်!
5:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 29 တွင်
Indianapolis ကျိန်းသေ abuzz ပါ!
ငါ Meez ခံစားနေပါတယ် မနေ့ကငါသားကိုလှည့်လိုက်တယ်။ သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ avatars တွေမှာအလုပ်လုပ်နေကြပြီ။ နှုတ်ဖြင့်ပြောသောစကားသည်ကြီးလှ၏။